Umhla My Pet » 7 Tips Kuba bethandana
uye isithunywa uthando kwankqonkqoza yakho? Wena yenye yezo zinethamsanqa, kodwa ngoku ukugcina idangatye. Abo abatshatileyo obungunaphakade njani loo nto? Wena ilungelo sijonge kwicala labo kwaye bazame ukufunda into kubo. Nazi ezinye iimfihlelo zabo kwaye ezinye iingcebiso kukunceda ugcine ulwalamano yimpumelelo ngokuthandana:
1. uzithembe wena
Yinto zonke ngawe, kodwa kakhulu imiba ubudlelwane afumane imithombo zabo amaqabane amabini’ ukuzithemba. Kanjalo, phambi ngothando umntu, kufuneka ube nokuvumelana ngokuphelelyo ngokwakho, ukuba umthande, uthembe ngokwakho. Ekubeni isibini asililo ithuba ukuzimela emva komhlana othile. Ngaba / yena eliqaqambileyo? Musa zibuze kutheni / yena unawe. kunokuba, uqiniseke ukuba enze umdlalo omhle. Yena / ukwazele naye ithuba lokuba abe kunye nomntu ofana nawe. Ngaphandle kokuba ukungazithembi, kufuneka ubone ngokwakho oko wena, yaye yintoni iqabane lakho ubona kuni.
2. Yokozela ikhwele lakho
Ukuba isibini kuthetha ehamba kunye kwicala elinye. Ukukholosa omnye ibalulekile ezinxulumene ngqo ukuzithemba kwakho. iqabane lakho izicwangciso ukuba ingokuhlwa kunye nabahlobo ebharini? Mnike / zayo isithuba kwaye musa eliwabandezelayo ngemibuzo efana: Ubuphi? Ngaba amantombazana apho / guys? Ubukhwele awayedinwe kwaye ngokuqinisekileyo kuyeyona ndlela ukuthumela umntu kude.
Enye yezona zinto zibalaseleyo ngokuba isibini yinto yokuba kufuneka umntu onokukuxhasa ngamaxesha obunzima. Ukwamkela encouragements, nokwamkela isimo efanayo xa iqabane lakho uyakufuna. Nabani na ulwalamano ophumeleleyo uya kukuxelela ukuba amaqabane uthando zezi, Okokuqala, ukunyaniseka kunye nokuxhasa abahlobo ukuba omnye, emveni koko kuphela, abathandi.
4. Mothuse omnye komnye
sonke siziva imiphumo lwesiqhelo, le umhlwa uguqulela wena sweetie lakho iitapile kwesingqengqelo. Sonke imikhwa yethu encinane zalisa bethu ubomi, kodwa ukuba ufuna ukugcina lilangatye ubuhlobo benu phezulu, ndiyazama ukuba zifunxwe yemihla ngemihla ngaphandle gwenxa na ebomini bakho. Phumani kunye, ukwabelana ngamava amatsha. Khumbula ukuba uthando ifana usana, kufuneka zidluliselwe.
unxibelelwano Open yindlela leyo enokubangela ukuba ulwalamano enamandla. Oku kukunceda ukwazi omnye ekuthini nguyena, Ndiyayiqonda indlela ovakalelwa ngayo ngemiba eyahlukeneyo, ubone zelinye uluvo. Musa ukwakha iinqaba intlabathi! Ukunxibelelana nabanye kunye iziseko nolwalamano wakho uya zisebenze ngaphakathi ngekhonkrithi.
6. Thatha ixesha ngokwakho
A nolwalamano kufuneka ixesha abazinikeleyo, kodwa oku akuthethi ukuba iqabane ngalinye kuba nantoni na ngaphandle koko. Usenakho nabahlobo bakho, ezikunika umsebenzi wakho! Ihambo ixesha kubo kwaye wena wedwa. Emva kweeyure ezimbalwa ngaphandle iqabane lakho liya kukwenza kuphoswa kwaye baxabisane ngaphezulu.
7. Sinyaniseke omnye komnye
Ukunyaniseka isiseko bhadlile na uhlobo lolwalamano. Nyaniseka nabanye ukunxibelelana iimvakalelo zakho ngomlomo okanye non-ngomlomo. Oku kuya kwenza indibaniselwano yakho lomelele kuphela.